Socdaalkii Cagaaraa iyo Dhagaxbuur - Cakaara News
Socdaalkii Cagaaraa iyo Dhagaxbuur
Dhagaxbuur(N) Jamce, 4tii December 2015, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo hogaaminaya waftigii balaadhnaa ee socdaalka cagaaran ayaa kahor intuusan saaka usoo ambabixin dhanka magaalada qabridahar kormeer indha-indhayn ah kusoo maray hospitaalka iyo beer ay kabaxdo noocyada kaladuwan ee khudrada oo kutaala dhulka ciidda ah ee duleedka magaalada wardheer iyadoo beerta lagu waraabiyo ceel gacmeed uu kaqoday mulkiilaha beertan oo ah qurbajoog deegaanka u dhashay.
Kadibna, madaxwaynaha iyo waftigiisa ayaa cagta saaray wadada qabridahar iyagoo wadadaa kusoo maray qabaleeyo da’ wayn oo ay kamid ahaayeen: Waaf-dhuug, garloogube, yucub, ismooday, kudunbuur iyo waliba ceel-macaan.
Shacabwaynaha qabaleeyadan dhamaantood ayaa madaxwaynaha iyo waftigiisa kaga hor imanayay wadooyinka iyagoo wajiyadooda ay kamuuqato dareen farxadeed. Madaxwaynaha ayaana u istaagayay oo xog waraysanayay xaalada nololeed ee shacabka kunool goobahaasi. Kadibna uga waramayay ujeedada socdaalkan isagoo waliba kajawaabayay baahidooda.
Waxaana laga qadeeyay magaalada qabridahar oo wakhti kooban transit lagu ahaa. Kadibna, waxaa looga sii gudbay dhanka dhagaxbuur oo uu safarku kuwajahnaa.
Wax lasii socdaba, waxaa lagaadhay qabalaha Hoodaale ee degmada dhagaxbuur oo uu maalmahanba kasocday kulan wayne khibrad iswaydaarsi ah oo ay sii hogaaminayeen madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha mudane Cabdixakiin Cigaal, madaxa xarunta dhexe lehna awood madaxwayne kuxigeen mudane Cabdicasiis Maxamed, wasiirka xafiiska biyaha tamarta iyo macdanta marwo Fartuun Cabdi Mahdi. Kaas oo aykasoo qaybgaleen madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka mudane Khadar Cabdi Ismaaciil, mas’uuliyiin sare, 68da degmo, 9ka gobol iyo 4ta maamul magaalo.Kulan waynahan oo kusaabsanaa khibrad iswaydaarsi qaabka loo dhisayo biyo-xidheenada oo mashruuca biyo-xidheenka qabalahani u noqday mid tusaale practical ah laga qaato ayaa kusoo gabagaboobay in ladardargaliyo shaqooyinka biyoxidheenada.
Ugudanbayna, madaxwaynaha iyo waftigiisa ayaa xili fiidkii ah kusoo dheelmaday magaalada dhagaxbuur iyadoo halkaa ladhixi doono caawa. Kooxaha fanka iyo suugaantuna ay katumi doonaan.